Amadodakazi abhokode abulala unina ngommese - Ilanga News
Home Izindaba Amadodakazi abhokode abulala unina ngommese
Kuthiwa umufi ubenziwa umzanyana ngenkani
UBETHWELE kanzima owesifazane wakwa-AA, eMlazi okushaqeke umndeni wakhe no-mphakathi ngokugwazwa kwakhe abulawe kanti kuso-lwa amadodakazi akhe amabili – eneminyaka ewu-14 newu-21 ubudala – ngalesi sigameko esenzeke ngoMgqibelo.
Amadodakazi kaNkz Hazel Zandile Gumede (44), okumanje aboshiwe, kuthiwa omakhelwane bezwe ngawo ukuthi unina asemyise kwagoqanyawo. ILANGA lithole ukuthi umufi ubengumzanyana ngenkani njengoba ebephoqwa yindodakazi yakhe eneminyaka ewu-21 ukuba agade izingane zayo ezimbili, yona igqanqule iye ebumnandini.
Kuyimanje amalungu omndeni kamufi athi asakhungathekile ngoba kawaqondi kahle ukuthi yini le ebingaholela ekubeni izingane zikhethe ukubhokoda unina ngo-mmese zize zimbulale. Elinye ilungu lomndeni elikhulume neLA-NGA, ngaphansi kombandela wokuthi igama lalo lingadalulwa, lithe lokhu okwenzekile yinto yokugcina abebengayilindela, yize bebazi ukuthi umufi akahlalisene ngokuthula namadodakazi akhe, ikakhulukazi endala.
“Esikwaziyo wukuthi bebeba nakho ukungaboni ngasolinye njengoba umsolwa lona omdala enezingane ezimbili abejwayele ukuxabana nonina ngazo efuna azigade yena ahambe izindawo zobumnandi,” kusho yena.
ILANGA lifike qhathatha endaweni yesigamelo ngoMgqibelo, isidumbu sikaNkz Gumede si-ngakathathwa, kanti okuhlaluke khona wukuthi ngisho omakhelwane bebekhungathekile bengaqondi ukuthi isenzo esinjengalesi senzeke kanjani.
Ngaphambi kokushaqwa ngabomthetho, abasolwa babuzwe ngabebekhona ukuthi kwenzekeni, kodwa bangakhuluma into ecacile. Kune-video lapho bezikhulumela. Lona omncane ubelokhu ekhophoza nje, lo omdala kunguyena ophendulayo ukuthi vele bebenakho ukungaboni ngasolinye nonina bemsola ngokuthi unaka kakhulu isoka lakhe, aphinde aliyekele libahlukumeze ngokukhuluma kabi nabo.
Uma bebuzwa ukuthi ngabe bebekuhlosile yini ukubulala unina, lona omdala akazange aphume nempendulo eqondile, ubelokhu ekhuluma izinto ezingaqondakali kodwa engafuni ukuphendula imibuzo ngokuqondile. Omunye uthe vele bebehlala bexabana njengoba unina ubebuye ahlale nabo engafuni ukubakhulumisa, ikakhulukazi uma kukhona isoka lakhe.
“Kusukela kudala nje, lapha ekhaya sihlala ngokungazwani. Umama akanqeni ukuvele asihlinele angasikhulumisi, kwesinye isikhathi ayekele isoka lakhe lisithethise, likhulume nathi noma yikanjani,” kusho lo omdala kwi-video.
Okuqaphelekile ngabo wukuthi bebengaqondakali noma bathukile okanye kabanandaba njengoba bekungabonakali nonyembezi emehlweni abo. Evalelwa ekhoneni ngomakhelwane lo omdala, bebuza ukuthi pho sebengaze babulale unina, uthe yena ubephuma esitolo wafika kubo sekunegazi, unina esefile.
Omunye womakhelwane okhulume neLANGA, obekhona ngesikhathi amaphoyisa eseyolanda isidumbu, uthe selokhu wabakhona, ubengakaze azitshele ukuthi angabona into enjengalena yize noma bekwaziwa ukuthi abasolwa baya-hlupha, ikakhulukazi lona omdala okuke kwanda nezinsolo zokuthi udla izidakamizwa.
“Impela siyazi ukuthi bebehlala ngokungazwani kepha-ke sonke besizitshela ukuthi yizindaba nje zomndeni nokuthi izingane ziba yizingane nje ngoba zingafuni ukukhuzwa. Lokhu kokuthi zize zithathe isikhali ngenhloso yokulimaza unina, kuyasabisa. kwathina si-ngabazali sesizosaba ukuthethisa izingane zethu.
“Engikwaziyo ngomufi wukuthi ubengumuntu ongaphuzi kodwa omunye wabasolwa uyaphuza, obekuthi uma esephuzile alwe nonina,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kulindeleke ukuba abasolwa bavele eNkantolo yeMantshi eMlazi namuhla ngoLwesibili.
“Kakwaziwa ukuthi kwenzekeni, kepha kuthiwa lokhu kwenzeke ngemuva kokungaboni ngasolinye phakathi kwabasolwa nonina. Njengamanje basesitokisini eBhekithemba, babekwe icala lokubulala,” kusho yena.
Previous articleKufunwa owesifazane “othumbe” ingane
Next articleSENIOR PAYROLL OFFICER Ref. No. SPO03102019